FAQs / Terms & conditions | ananda
Below are our terms & conditions of services and our frequently asked questions.
အမှတ် (၅၂၀ အေ၊ ၁+၃ ဘီ)၊ မြေညီထပ်နှင့် ဒုတိယထပ်၊ Excel Home Mart၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းရပ်ကွက်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။
Thadingyut Promo FAQs
Thadingyut promotion ဆိုတာ ဘာလဲ။
အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက် မှ ၂၈ ရက် အတွင်း ananda Starter Packs (Device + SIM, Device + SIM + Unlimited, Hero Product) and rental device များအား ဝယ်ယူ/ ဌားရမ်းသော ananda ၏ သုံးစွဲသူအသစ်များ အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ Special Promotion ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားသော promotion ကာလအတွင်းမှာ ananda ရဲ့ မည်သည့် Starter Packs (Device + SIM, Device + SIM + Unlimited, Hero Product) and rental device များအား ဝယ်ယူ/ ဌားရမ်း သူများကို System မှ random ၁၄ ဦးအား ရွေးချယ်၍ hoco ထုတ်ကုန်များအား လက်ဆောင်အဖြစ် ရရှိနိုင်သော အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်သူတွေက ကံထူးရှင် ဖြစ်နိုင်တာလဲ။
အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက် မှ ၂၈ ရက် အတွင်း – ananda Starter Packs (Device + SIM, Device + SIM + Unlimited, Hero Product) and rental device များအား ဝယ်ယူ/ ဌားရမ်းပြီး activate လုပ်ထားတဲ့ သူတွေ အားလုံးပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ananda ရဲ့ပစ္စည်းများအား ဝယ်ယူခြင်း (သို့) ဌားရမ်းခြင်း ဖြင့် activate ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ananda mifi unlimited30
ananda mifi plus unlimited30
ananda mifi plus
ananda mifi (rental)
ananda router unlimited90
ananda router unlimited30
ananda router (rental)
Winner ဖြစ်ကြောာင်း မည်သို့ သိနိုင်လဲ။
အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ မှ ၂၁ ရက်အတွင်း activation ပြုလုပ်ထားသော Customer များမှ ကံထူးသူ ၇ ယောက် အားရွေးချယ်ပြီး ၂၃ ရက် နေ့မှာ ဆက်သွယ်မှု ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက်အတွင်း activation ပြုလုပ်ထားသော Customer များထဲမှ ကံထူးသူ ၇ ယောက်အား ရွေးချယ်ပြီး ၃၀ ရက် နေ့မှာ ဆက်သွယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
promotion ကာလမှာ ဝယ်ယူထားပြီး အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် မှ အောက်တိုဘာ၂၈ ရက် နောက်ပိုင်းမှ activate လုပ်လို့ရပါလား။
ananda SIM ကို ၂၈ ရက် အောက်တိုဘာ ကျော်မှ လုပ်လို့ရပါတယ်… သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကာလကျော်ရင်တော့ Promotion ထဲ ပါဝင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Hoco ထုတ်ကုန်များ ဖြစ်တဲ့ wireless earphones, headphones, speakers and power banks တွေပေးမှာပါ။
ananda isa4G+ data network, providing fast speeds and stable connections to the people of Yangon (and later Mandalay).
Why should I choose ananda?
ananda is committed to delivering customer service excellence, and to developing insightful products and services that will meet the special needs of our customers.
ananda is always 4G+ (4G LTE without dropping to the slower 2G / 3G network), and offers an unlimited data plan at the highest speed available.
Which devices are compatible with ananda?
Any device with Wi-Fi capability is compatible with ananda; phones, tablets smart TVs, games consoles, etc. can all connect to an ananda mifi or router.
Will ananda use its own network?
ananda has builtastate-of-the-art 4G+ network using the 2600MHz frequency to provide unrivalled services in Yangon and Mandalay.
Does ananda offer prepaid or postpaid solutions?
ananda offers only prepaid solution.
More information is available on our: 1) website www.ananda.com.mm 2) my ananda app (download at Google Play Store, Apple App Store, or www.ananda.com.mm/app) 3) Facebook page (ananda livemore) You can also visit the “support” section of our website or app to chat withacustomer care executive.
အနန္တက သုံးစွဲသူတွေကို ဘာဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးပါသလဲ
အနန္တမှ ပေးအပ်သောဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ် ၅ မျိုး ရှိပါတယ်။
(၁) ananda mifi pack
(၂) ananda mifi+ pack
(၃) ananda router pack
(၄) ananda router unlimited pack
(၅) ananda SIM pack
အနန္တမှာ အကန့်အသတ်မဲ့ အင်တာနက် အစီအစဉ် တစ်မျိုးတည်း ရှိတာလား
အကန့်အသတ်မဲ့ဲ့ အင်တာနက် တစ်မျိုးတည်း မဟုတ်ပါဘူး။
စတင်အသုံးပြုခြင်း အစီအစဉ် သက်တမ်းကုန်သွားပါက ဝယ်ယူထားတဲ့ အကန့်အသတ်မဲ့အစီအစဉ်အတိုင်း ဆက်အသုံးပြုလို့ ရသလို၊ မိမိစိတ်ကြိုက် GB ပမာဏကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ value plan သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုလို့လည်း ရပါတယ်။
အနန္တ ဆင်းမ်ကတ်ကို စမတ်ဖုန်းအားလုံးမှာ အသုံးပြုလို့ ရပါသလား။
အနန္တ အင်တာနက်အတွက် လိုအပ်တဲ့ band 38 (TDD LTE with 2600 MHz frequency) ပါရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာသာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင့် စမတ်ဖုန်းမှာ အနန္တ ဆင်းမ်ကဒ်ကို အသုံးပြုဖို့အတွက်
၁။ mobile network settings သို့ သွားပါ။
၂။ Access Point Names ကို ရွေးပြီး add APN ကို နှိပ်ပါ။
၃။ APN name နှင့် APN နေရာတွင် ‘ananda’ ဟု ထည့်ပါ။
၄။ အနန ္တအင်တာနက်ကို သင့် စမတ်ဖုန်းမှာ စိတ်ကျေနပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်ရဲ့ အနန္တဆင်းမ်ကဒ်ကို ဘယ်လို မှတ်ပုံတင်မလဲ။
၁။ ဆင်းမ်ကဒ်မှတ်ပုံတင်ရန် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ဖို့ လိုပါတယ်။
သုံးစွဲသူ ID အမှတ် ဂဏန်း ၁၀ လုံး(ဆင်းမ်ကဒ်တွင် ပုံနှိပ်ထားပါတယ်။)
PUK ဂဏန်း ၈ လုံး(ဆင်းမ်ကဒ်တွင် ပုံနှိပ်ထားပါတယ်။)
မှတ်ပုံတင်၊ ပတ်စ်ပို့ သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
၂။ ဆင်းမ်ကဒ်မှတ်ပုံတင်ရန် my ananda application ကို (Play Store, App Store, or direct SPK at ananda.com.mm/app) တွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ။ သို့မဟုတ် ananda.com.mm/register သို့ သွားပါ။
၃။ ညွှန်ကြားချက် အဆင့်ဆင့် အတိုင်း ဆင်းမ်ကဒ်ကို မှတ်ပုံတင်ပါ။
ananda starter pack ကို ဘယ်မှာဝယ်လို့ရမလဲ။
ananda starter pack တွေကို ananda ဆိုင်များနှင့် ananda မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော authorized dealers များတွင် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် (ananda.com.mm/map) မှာ သို့မဟုတ် my ananda application (app/more/map/store map) မှလည်း သင်နဲ့ အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ ananda စတိုးဆိုင်တွေကို ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ananda mifi pack တွင် ဘာတွေ ပါဝင်ပါသလဲ။
“ ananda mifi pack တွင်
၁။ ananda mifi စက် နှင့် ဘက်ထရီ (၁၀ နာရီအထိအသုံးပြုနိုင်သော)
၂။ မှတ်ပုံတင်ပြီးချိန်မှစ၍ ရက်၃၀ သက်တမ်းရှိသော ananda ဆင်းမ်ကဒ် တို့ပါရှိပါသည်။
ananda mifi pack ၏ဈေးနှုန်းမှာ ၃၅,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ananda ဆိုင်များနှင့် ananda မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော authorized dealers များထံတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။”
ananda mifi plus pack တွင် ဘာတွေ ပါဝင်ပါသလဲ။
ananda mifi plus pack တွင်
၁။ ananda mifi စက် နှင့် ဘက်ထရီ (၁၅ နာရီအထိအသုံးပြုနိုင်သော)
ananda mifi plus pack ၏ဈေးနှုန်းမှာ ၄၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ananda ဆိုင်များနှင့် ananda မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော authorized dealers များထံတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ananda router pack တွင် ဘာတွေ ပါဝင်ပါသလဲ။
ananda router pack တွင်
၁။ ananda router စက် နှင့်
ananda router pack ၏ဈေးနှုန်းမှာ ၅၅,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ananda ဆိုင်များနှင့် ananda မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော authorized dealers များထံတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ananda SIM pack တွင် ဘာတွေ ပါဝင်ပါသလဲ။
ananda SIM pack တွင်
၁။ ananda SIM ကဒ်နှင့်
၂။ 1 GB data (မှတ်ပုံတင်ပြီးချိန်မှစ၍ ရက်၃၀ သက်တမ်းရှိသော) တို့ပါရှိပါသည်။
(ananda network နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော စမတ်ဖုန်းများတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။)
ananda SIM pack ၏ဈေးနှုန်းမှာ ၁,၅၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ananda ဆိုင်များနှင့် ananda မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော authorized dealers များထံတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ananda mifi pack ကို ဝယ်ယူပြီးပါက ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ။
၁။ my ananda app ကိုရယူ၍ သင့်ဖုန်းတွင် ထည့်သွင်းပါ။
၂။ သင့် ဆင်းမ်ကဒ်ကို activate ပြုလုပ်ပါ။
၃။ ငွေဖြည့်သွင်းပြီး နှစ်သက်ရာ အစီအစဉ်ကို ဝယ်ယူပါ။
၄။ စက်ကို စတင် တပ်ဆင်ပါ။
၅။ Wi-Fi ntework နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များကို စက်အသုံးပြုမှုလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင် ကြည့်ပါ။
ananda mifi plus pack ကို ဝယ်ယူပြီးပါက ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ။
ananda router pack ကို ဝယ်ယူပြီးပါက ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ။
ananda router unlimited pack ကို ဝယ်ယူပြီးပါက ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ။
၃။ စက်ကို စတင် တပ်ဆင်ပါ။
၄။ Wi-Fi ntework နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
ananda SIM pack ကို ဝယ်ယူပြီးပါက ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ။
လက်ရှိဝယ်ယူထားသော အစီအစဉ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပါက ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
လက်ရှိဝယ်ယူထားသော အစီအစဉ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပါက ငွေဖြည့်သွင်းပြီး နှစ်သက်ရာ အစီအစဉ်သစ် (unlimited or value) ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ လက်ရှိဝယ်ယူထားသော အစီအစဉ် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးခင် အီးမေးလ်မှဖြစ်စေ my ananda application ရှိ အသိပေးချက်များမှဖြစ်စေ SMS မှဖြစ်စေ အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
ငွေ ဘယ်လို ဖြည့်လို့ ရနိုင်မလဲ။
အောက်ပါနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပြီး ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
> အနန ္တဆိုင်တွင် ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်။(သင်နှင့် အနီးဆုံး အနန ္တဆိုင်များ ကို my ananda application တွင် ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။)
> အနန ္တဆိုင် (သို့)အနန ္တနှင့် မိတ်ဖက် ဆိုင်များတွင် ငွေဖြည့်ကတ် ဝယ်လို့ ရပါတယ်။
> အနန ္တဆိုင်မှာ E top up ဖြင့် ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
my ananda application (သို့) ananda website တွင်
> MPU ကဒ်(ecommerce purchase အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားသော MPU ကဒ်)
တို့ဖြင့် အွန်လိုင်းကနေ ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
သင့် လက်ကျန်ငွေကို my ananda application ရဲ့ မူလစာမျက်နှာ(home screen) တွင် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဖုန်းတွင် my ananda application ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုရန် ananda.com.mm/app သို့ သွားရောက်ပါ။
လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ plan ကို ဘယ်လို သက်တမ်းတိုးမလဲ။
“ သင့်အကောင့်ထဲတွင် လက်ကျန်ငွေ အလုံအလောက်ရှိလျှင် starter pack သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားလျှင် သင့် plan သည် အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးပါလိမ့်မယ်။
my ananda application သို့မဟုတ် ananda.com.mm. တွင် base plan များကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။”
base plan ကို ဘယ်လို ဝယ်ရမလဲ။
my ananda application သို့မဟုတ် ananda.com.mm. တွင် base plan ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဝယ်ယူထားတဲ့ plan ကို အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးခြင်းကို ဘယ်လို ပိတ်ရမလဲ။
ဝယ်ယူထားသော plan ကို အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးခြင်းကို my ananda application တွင် ပိတ်နိုင်ပါတယ်။(app > home > turn off auto renewal)
Base Plan Bonus က ဘယ်လိုမျိုးလဲ။
တချို့ base plan တွေမှာ data bonus GB တွေ တွဲထားပါတယ်။ Bonus ပါတဲ့ base plan ကို ဝယ်ယူပါက Bonus ကို သင့်ရဲ့ အကောင့်ထဲ ပေါင်းထည့်ပေးပါတယ်။
Base plan သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဒေတာကို ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ ရပါသလား။
Value plan သက်တမ်းကုန်ပြီးနောက် ၇ ရက် အတွင်း နောက်ထပ် value plan တစ်ခု ဝယ်ယူပါက သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဒေတာကို ဝယ်ယူလိုက်သော plan အသစ်မှာ ထပ်ပေါင်းထည့်ပေးပါတယ်။
လက်ရှိ unlimited plan သက်တမ်းမကုန်သေးခင် နောက်ထပ် value plan အသစ်ကို ဝယ်လို့ရပါသလား။
သုံးစွဲသူများနစ်နာမှုမရှိစေရန် လက်ရှိ အစီအစဉ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှသာ နောက်ထပ် value plan ကို ဝယ်ယူစေလိုပါသည်။ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးခင် ဝယ်ယူပါက လက်ရှိအစီအစဉ်တွင် ကျန်ရှိသော အကန့်အသတ်မဲ့ဒေတာအသုံးပြုခွင့်သက်တမ်းမှာ ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်ပြီး အစီအစဉ် အလိုအလျောက်ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိ unlimited plan သက်တမ်းမကုန်သေးခင် နောက်ထပ် unlimited plan အသစ်ကို ဝယ်လို့ရပါသလား။
သုံးစွဲသူများနစ်နာမှုမရှိစေရန် လက်ရှိ အစီအစဉ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှသာ နောက်ထပ် unlimited plan ကို ဝယ်ယူစေလိုပါသည်။ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးခင် ဝယ်ယူပါက လက်ရှိအစီအစဉ်တွင် ကျန်ရှိသော အကန့်အသတ်မဲ့ဒေတာအသုံးပြုခွင့်သက်တမ်းမှာ ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်ပြီး အစီအစဉ် အလိုအလျောက်ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်
လက်ရှိ value plan သက်တမ်းမကုန်သေးခင် နောက်ထပ် value plan အသစ်ကို ဝယ်လို့ရပါသလား။
သုံးစွဲသူများနစ်နာမှုမရှိစေရန် လက်ရှိ အစီအစဉ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမှသာ အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုကို ဝယ်ယူစေလိုပါသည်။ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးခင်ဝယ်ယူပါက လက်ရှိအစီအစဉ်တွင် ကျန်ရှိသော main balance မှ ဒေတာကို နောက်ထပ်ဝယ်ယူသော value plan တွင် ပေါင်းထည့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အစီအစဉ်အသစ်သက်တမ်းတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိသော bonus ဒေတာကိုမူ ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Base plan ရော bonus ရောရှိပါက ဒေတာကို ဘယ် plan ကနေ ဦးစားပေးဖြတ်တောက်ပါသလဲ။
“ Base plan သက်တမ်းကုန်ပြီးနောက် ၇ ရက် အတွင်း နောက်ထပ် base plan တစ်ခု ဝယ်ယူပါက သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဒေတာကို ဝယ်ယူလိုက်သော plan အသစ်မှာ ထပ်ပေါင်းထည့်ပေးပါတယ်။”
မိုင်အနန ္တအက်ပလီကေးရှင်း ကို တခြား network ဖြင့် အသုံးပြုလို့ ရပါသလား။
မိုင်အနန ္တအက်ပလီကေးရှင်း ကို မည်သည့် network တွင်မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မိုင်အနန ္တအက်ပလီကေးရှင်း ကို ananda network တွင် အသုံးပြုပါက အင်တာနက်အသုံးပြုခ မကုန်ပါ။”
မိုင်အနန ္တအက်ပလီကေးရှင်း ကို ဘယ် ဘာသာစကားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
မြန်မာဘာသာ၊အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မိုင်အနန ္တအက်ပလီကေးရှင်း သည် အရွယ်အစား ဘယ်လောက် ရှိပါသလဲ။
Andriod ကော iOS ပါ ၄၀MB ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။
Devices: ananda mifi
mifi စက်အတွက် အာမခံကာလက ဘယ်လောက်လဲ။
mifi စက်အတွက် ၁၂ လ – ဘက်ထရီအတွက် ၆ လ ဖြစ်ပါတယ်။ အာမခံကာလသည် သုံးစွဲသူမှ စက်ကို စတင်ဝယ်ယူတဲ့နေ့က စပါတယ်။
mifi စက်အတွက်အာမခံတွင် မည်သည့်ချို့ယွင်းချက်များကို အာမခံပေးထားပါသလဲ။
အောက်ပါ စက်ရုံထုတ် ချို့ယွင်းချက်များအားလုံးအတွက် စက်ပစ္စည်း အာမခံကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၁။ Wi-Fi လိုင်းဆွဲအား မရခြင်း ၂။ စက်ဖွင့်၍ မရခြင်း ၃။ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်၍ မရခြင်း ၄။ စက် အလိုအလျောက် ပိတ်သွားခြင်း ၅။ ခလုတ်များ နှိပ်မရခြင်း ၆။ စက် အပူလွန်ကဲခြင်း ၇။ USB ချိတ်ဆက်ရာတွင် အလုပ်မလုပ်ခြင်း ၈။ USB အပေါက် ချောင်နေခြင်း ၉။ ခလုတ်များ မီးမလင်းခြင်း ၁၀။ ပလပ်ခေါင်း အလုပ်မလုပ်ခြင်း
mifi စက်အတွက်အာမခံတွင် မည်သည့်ချို့ယွင်းချက်များ အာမခံ မရရှိပါသလဲ။
အောက်ပါ ချို့ယွင်းပျက်စီးမှုများကို စက်ပစ္စည်းအာမခံက အာမခံ မပေးထားပါ။ ၁။ အသုံးပြုနည်းပါ ညွှန်ကြားချက်များကို မလိုက်နာသောကြောင့် ဖြစ်သော ပျက်စီးမှု ၂။ အသုံးပြုသူ၏ အသုံးပြုပုံမှားယွင်းခြင်း၊ ပေါ့ဆမှုနှင့် မတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်သော ပျက်စီးမှု ၃။ ananda ၏ အသိအမှတ်ပြုမရယူဘဲ စက်ကို ဖြုတ်ပြီး ပြုပြင်ခြင်း ၄။စက်ပေါ်သို့ ရေ နှင့် အခြားအရည်များ ဖိတ်ခြင်း၊ စက် ပြုတ်ကျ၊လွတ်ကျခြင်း၊ ဆားကစ်ဘုတ် လောင်သွားခြင်း ၅။ သဘာဝဘေးကဲ့သို့ မရှောင်လွှဲနိုင်သော အဖြစ်အပျက်များကြောင့် ပျက်စီးမှု ၆။ သက်တမ်းကြာမြင့်သဖြင့် ဖြစ်သော ယိုယွင်းမှု ၇။ စက်၏ IMEI/serial number သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖြုတ်ထားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပြင်ထားခြင်း ၈။ အာမခံသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်ဖြစ်သော ချို့ယွင်းချက်များ ၉။ ထိခိုက်မှုကြောင့် ပျက်စီးခြင်း၊ မျက်နှာပြင် အက်ကွဲခြင်း ၁၀။ နေရောင်ကြောင့်၊ အပူကြောင့် ဖြစ်သော ပျက်စီးမှု
အာမခံ ခံစားခွင့်ကို ဘယ်လိုရယူရမလဲ ။
mifi စက်ကို အနီးဆုံး ananda စတိုးဆိုင်သို့ ယူသွားပါ။
mifi ရဲ့ စက်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ(device manangement web interface) ကို ဘယ်လို ဝင်ရမလဲ။
၁။ mifi ရဲ့ Wi-Fi နဲ့ ချိတ်ထားပါ။_x000D_
၂။ device management ဝက်ဘ်စာမျက်နှာသို့ ရောက်အောင် browser တွင် https://192.168.1.1 ကို ရိုက်ထည့်ပါ။_x000D_
၃။ password နေရာတွင် admin ရိုက်ထည့်ပါ။
mifi ကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေတဲ့ စက်တွေကို ဘယ်မှာ ကြည့်ရမလဲ။
device management web interface > Information > Connected Users ကို ဝင်ကြည့်ပါ။
mifiစက်ရဲ့ admin လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ဘယ်လို ပြောင်းမလဲ။
၁။ mifiရဲ့ Wi-Fi လိုင်းနဲ့ ချိတ်ထားပါ။
၂။ mifiရဲ့ device admin စာမျက်နှာသို့ ရောက်အောင် browser တွင် https://192.168.1.1 ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
၃။ password နေရာတွင် “ ” admin” ” ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
၄။ Settings > Device Settings > Account Management ကို ရွေးချယ်ပါ။
၅။ လျှို့ဝှက်နံပါတ်အသစ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
၆။ “ ” Apply” ” ကို နှိပ်ပြီး log out လုပ်ပါ။
mifi စက်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဘယ်မှာ ကြည့်ရမလဲ။
mifi device admin page ကို ဝင်ပြီး device admin page > Information > Device Information တွင် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
mifi Setting များကို မူလအခြေအနေများအတိုင်း ဘယ်လို ပြန်ထားမလဲ။
၃။ Settings > Device Settings > Reset ကို ရွေးပါ။
၄။ ‘restore factory settings’ ကို ရွေးချယ်ပါ။
နောက်တစ်နည်းအနေဖြင့် mifi ရဲ့ အနောက်ဖုံး အတွင်းဘက်မှာရှိသော ‘reset’ ခလုတ်ကို ဖိနှိပ်ထားပြီး mifi Setting များကို မူလအခြေအနေအတိုင်း ပြန်လည် ထားရှိနိုင်ပါတယ်။
mifi ကို Reboot ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
mifi device admin page> Settings > Device Settings > Reboot mifi ကို ရွေးချယ်ပြီး စက်ကို reboot လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အနန ္တmifi စက်ကို ဘယ်လို အားသွင်းမလဲ။
အနန ္တmifi ကို အားသွင်းရန် အသင့်တော်ဆုံး Power adapter မှာ
Input: AC100V-240V ~ 50/60Hz 0.25 A
Output : DC5V 1000mA ဖြစ်ပါတယ်။
Devices: Huawei B310 router
router က ဘယ်လို အလုပ်လုပ်ပါသလဲ။
router ဟာ အနန ္တ4G+ network ကို အနန ္တဆင်းမ်ကတ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အင်တာနက်လိုင်းကို အနီးအနားက Wi-Fi အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စက်တွေ(လက်ပ်တော့၊ စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက် စသဖြင့်) အသုံးပြုနိုင်အောင် ကြိုးမဲ့နည်းဖြင့် ပြန်လည် ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ပါတယ်။
router စက်ကနေ တပြိုင်နက်တည်း စက် ၃၂ လုံးအထိ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
routerစက်ကို ဘယ်လို ဖွင့်မလဲ။
“ ” ” အနန ္တ ဆင်းမ်ကဒ်ကို ဆင်းမ်ကဒ်အပေါက်ထဲ ထည့်ပြီး Huawei B310 router ကို ပါဝါကြိုးတပ်ပါ။
router အလိုအလျောက် ပွင့်လာပြီး အနန ္တ 4G+ mobile network ကို ရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
သတိပြုရန်။ routerစက် အလုပ်လုပ်နေစဉ် ဆင်းမ်ကဒ်ထည့်ခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက ဆင်းမ်ကဒ်၏ လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ကို ထိခိုက်စေခြင်း(သို့)ဆင်းမ်ကဒ်ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။”
router က Wi-Fi ကို ဘယ်လို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမလဲ။
၁။ Wi-Fi သုံးမယ့် စက်ကိုဖွင့်ပါ။(စမတ်ဖုန်း၊ လက်ပ်တော့)
၂။ ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ network များထဲမှ သင့် router network name(SSID) ကို ရွေးချယ်ပါ။
၃။ လျှို့ဝှက်နံပါတ်(Wi-Fi key) ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
network name(SSID) နဲ့ လျှို့ဝှက်နံပါတ်(Wi-Fi key) တို့ကို router ၏ အောက်ခြေတွင် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Wi-Fi name (SSID) နဲ့ Wi-Fi လျှို့ဝှက်နံပါတ်များကို ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ။
၁။ router ရဲ့ Wi-Fi လိုင်းနဲ့ ချိတ်ထားပါ။ ၂။ router ရဲ့ device admin စာမျက်နှာသို့ ရောက်အောင် browser တွင် http://192.168.8.1 ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ၃။ လျှို့ဝှက်နံပါတ် နေရာတွင် ‘admin’ ဟု ရိုက်ထည့်ပါ။ ၄။ Settings > Wi-Fi Settings > Basic settings သို့ သွားပါ။ ၄။ သင် ထားချင်သော လျှို့ဝှက်နံပါတ်အသစ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ၆။ “Apply” ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် Log out လုပ်ပါ။
router စက်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဘယ်မှာ ကြည့်ရမလဲ။
Log in > Settings > System > Device Information ကို ရွေးချယ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
network name(SSID) နဲ့ လျှို့ဝှက်နံပါတ်(Wi-Fi key) တို့ကို ဘယ်မှာ ကြည့်လို့ ရမလဲ။
network name(SSID) နဲ့ လျှို့ဝှက်နံပါတ်(Wi-Fi key) တို့ကို router ရဲ့ အောက်ဘက်မှာ ရေးထားပါတယ်။
router စက်ရဲ့ setting နဲ့ အချက်အလက်များကို ဘယ်လို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့ရမလဲ။
၁။ router ရဲ့ Wi-Fi နဲ့ ချိတ်ထားပါ။ ၂။ router ရဲ့ device admin စာမျက်နှာသို့ ရောက်အောင် browser တွင် http://192.168.8.1 ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ၃။ user နေရာတွင် admin နှင့် password နေရာတွင် “ admin” ရိုက်ထည့်ပြီး log in ဝင်နိုင်ပါတယ်။
router စက်ရဲ့ admin လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ဘယ်လို ပြောင်းမလဲ။
၁။ router ရဲ့ Wi-Fi လိုင်းနဲ့ ချိတ်ထားပါ။
၂။ router ရဲ့ device admin စာမျက်နှာသို့ ရောက်အောင် browser တွင် https://192.168.8.1 ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
၃။ SSID နဲ့ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ (router စက်ရဲ့ အောက်ဘက်တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။)
၄။ Settings>Modify Password>Enter current password ကို ရွေးပါ။
၆။ “Apply” ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် Log out လုပ်ပါ။
စက်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ(device management web interface) ရဲ့ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ။
၁။ mifi ရဲ့ Wi-Fi လိုင်းနဲ့ ချိတ်ထားပါ။
၂။ mifi ရဲ့ device manangement webစာမျက်နှာသို့ ရောက်အောင် browserတွင် https://192.168.1.1 ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
၃။ လျှို့ဝှက်နံပါတ် နေရာတွင် ‘admin’ ဟု ရိုက်ထည့်ပါ။
၄။ Settings > Device Settings > Account Management သို့ သွားပါ။
၄။ လျှို့ဝှက်နံပါတ်အသစ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
router ရဲ့ ပါဝါကို ပိတ်ထားလို့ ရပါသလား။
ပါဝါကို ပိတ်ထားလို့ မရပါဘူး။
router အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ ပါဝါကြိုးတပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
ကျွန်ုပ်ရဲ့ router network ကို တခြားသူတွေ ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
သင့် router network ရဲ့ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို သိသူများသာ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
wireless security လုပ်ထားပြီး လျှို့ဝှက်နံပါတ် အသစ် ပြောင်းထားပါက သင့် hotspot က လုံခြုံမှု ရှိပါတယ်။
router စက် အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် အကူအညီ ဘယ်လို ရယူပါမလဲ။
အနန ္တ Customer Care ကို မိုင်အနန ္တအက်ပလီကေးရှင်း၊ Facebook messenger၊ Viber သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ် 09969787878 တို့ကတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အနန ္တစတိုးမှာ အကူအညီ ရယူနိုင်ပါတယ်။
router အာမခံတွင် မည်သည့် ချို့ယွင်းချက် များကို အာမခံပေးထားပါသလဲ။
အောက်ပါ စက်ရုံထုတ် ချို့ယွင်းချက်များအားလုံးအတွက် စက်ပစ္စည်း အာမခံကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၁။ Wi-Fi လိုင်းဆွဲအား မရခြင်း
၂။ စက်ဖွင့်၍ မရခြင်း
၃။ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်၍မရခြင်း
၄။ စက် အလိုအလျောက် ပိတ်သွားခြင်း
၅။ ခလုတ်များ နှိပ်မရခြင်း
၆။ routerစက် အပူလွန်ကဲခြင်း
၇။ USB ချိတ်ဆက်ရာတွင် အလုပ်မလုပ်ခြင်း
၈။ USB အပေါက် ချောင်နေခြင်း
၉။ ခလုတ်များ မီးမလင်းခြင်း
၁၀။ ပလပ်ခေါင်း အလုပ်မလုပ်ခြင်း
router အတွက် အာမခံ ကာလက ဘယ်လောက်လဲ။
– router စက်အတွက် ၁၂ လ
– အားသွင်းကြိုး အတွက် ၃ လ ဖြစ်ပါတယ်။
အာမခံကာလသည် သုံးစွဲသူမှ စက်ကို စတင်ဝယ်ယူတဲ့နေ့က စပါတယ်။
အာမခံ ခံစားခွင့်ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် မူရင်းပြေစာ နဲ့အတူ Huawei အာမခံကဒ်ပါ လိုအပ်ပါတယ်။
router စက်အတွက် အာမခံ ရှိပါသလား။
router စက်ကို ထုတ်လုပ်စဉ်က ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေအတွက် စတင်ဝယ်ယူတဲ့နေ့ကစပြီး ၁၂ လအတွင်း နှင့် အားသွင်းကြိုး အတွက် ၃ လ အာမခံ ပေးထားပါတယ်။
အာမခံ ရယူလိုပါက ဝယ်ယူထားသော မူရင်းပြေစာနှင့် Huawei အာမခံကဒ်ပြား ကို ယူဆောင်သွားရန်လိုအပ်ပါတယ်။
အာမခံနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အသေးစိတ် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များအတွက် သင့်စက်ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အောက်ပါ အမေးများသောမေးခွန်းများနဲ့ အဖြေများမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဆင်းမ်ကဒ်တစ်ခုတည်းကို mifi စက် ကော router မှာပါ အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ရပါတယ်။mifi ကော router မှာပါ အနန ္တဆင်းမ်ကတ်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
router အာမခံတွင် မည်သည့် ချို့ယွင်းချက် များကို အာမခံ မရနိုင်ပါဘူးလဲ။
အောက်ပါ ချို့ယွင်းပျက်စီးမှုများကို စက်ပစ္စည်းအာမခံက အာမခံ မပေးထားပါ။
၁။ အသုံးပြုနည်းပါ ညွှန်ကြားချက်များကို မလိုက်နာသောကြောင့် ဖြစ်သော ပျက်စီးမှု
၂။ အသုံးပြုသူ၏ အသုံးပြုပုံမှားယွင်းခြင်း၊ ပေါ့ဆမှုနှင့် မတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်သော ပျက်စီးမှု
၃။ Huawei ၏ အသိအမှတ်ပြုမရယူဘဲ စက်ကို ဖြုတ်ပြီး ပြုပြင်ခြင်း
၄။စက်ပေါ်သို့ ရေ နှင့် အခြားအရည်များ ဖိတ်ခြင်း၊ စက် ပြုတ်ကျ၊လွတ်ကျခြင်း၊ ဆားကစ်ဘုတ် လောင်သွားခြင်း
၅။ သဘာဝဘေးကဲ့သို့ မရှောင်လွှဲနိုင်သော အဖြစ်အပျက်များကြောင့် ပျက်စီးမှု
၆။ သက်တမ်းကြာမြင့်သဖြင့် ဖြစ်သော ယိုယွင်းမှု
၇။ စက်၏ IMEI/serial number သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖြုတ်ထားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပြင်ထားခြင်း
၈။ အာမခံသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်ဖြစ်သော ချို့ယွင်းချက်များ
၉။ ထိခိုက်မှုကြောင့် ပျက်စီးခြင်း၊ မျက်နှာပြင် အက်ကွဲခြင်း
၁၀။ နေရောင်ကြောင့်၊ အပူကြောင့် ဖြစ်သော ပျက်စီးမှု
အာမခံ ခံစားခွင့်ကို ဘယ်လို ရယူရမလဲ။
router စက်၊ Huawei ကတ် နဲ့ မူရင်းပြေစာတို့ကို ယူဆောင်ပြီး ananda စတိုး သို့မဟုတ် Huawei service centre သို့ သွားပါ။
အမှတ် ၂၀ ၊ အခန်း ၂ ၊ နှင်းဆီလမ်း ဘိုးလိန်းအောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်။ ရန်ကုန်။
၇၈လမ်း၊ ၂၇လမ်း x ၂၈လမ်းကြား၊ မန္တလေး။
router Setting များကို မူလအခြေအနေများအတိုင်း ဘယ်လို ပြန်ထားမလဲ။
Log in > Settings > System > Restore Defaults ကို ရွေးချယ်ပြီး Setting များကို မူလအခြေအနေအတိုင်းဖြစ်အောင် ထားနိုင်ပါတယ်။
router ကို Reboot ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
Log in > Settings > System > Reboot ကို ရွေးချယ်ပြီး စက်ကို reboot လုပ်နိုင်ပါတယ်။
router တွင် အခြား ဆင်းမ်ကဒ်များအသုံးပြုလို့ ရပါသလား။
router တွင် အနန ္တဆင်းမ်ကဒ်များကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
router နှင့် mifi စက်များကို စပေါ်ငွေပေးသွင်းပြီး ငှားရမ်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုရုံဖြင့် အလွယ်တကူငှားရမ်းနိုင်ပါပြီ။ router ငှားရမ်းစာချုပ်မှာ ၁၂ လဖြစ်ပြီး mifi အတွက် ငှားရမ်းစာချုပ်မှာ ၆လဖြစ်သည်။
စက်ငှားရမ်းခြင်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ananda.com.mm/shop/devices တွင်ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။
စက်ကိုအလွယ်တကူငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။ ananda experience ဆိုင်သို့ လာရောက်၍ စက်ငှားရမ်းခြင်းအကြောင်းကို စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ router ငှားရမ်းခြင်းအတွက် စပေါ်ငွေ ၅၅၀၀၀ ကျပ်နှင့် unlimited30 အတွက် ၃၅၀၀၀ ကျပ်၊ mifi ငှားရမ်းခြင်းအတွက် စပေါ်ငွေ ၃၅၀၀၀ ကျပ်ပေးသွင်းရပါမယ်။ router အတွက် အငှားစာချုပ်မှာ ၁၂ လ၊ mifi အတွက် အငှားစာချုပ်မှာ ၆လ ကြာမြင့်ပါမယ်။ ငှားရမ်းရန်အတွက် ပထမဦးစွာ unlimited30 အစီအစဉ်ကို ဝယ်ယူရပါမယ်။ ငှားရမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက ananda.com.mm/shop/devices တွင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
စက်ကို ဆက်လက်မငှားလိုတော့ပါက ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
စက်ကိုဆက်လက်မငှားလိုတော့ပါက စက်ကိုပြန်လည်အပ်နှံပြီး စပေါ်ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
စက်ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်သက်တမ်းမှာ router အတွက် ၁၂လ၊ mifi အတွက် ၆လ ကြာမြင့်ပါမယ်။
သင့်စက်ကို ananda experience ဆိုင်တွင် မူလပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်တကွ ပြန်လည်အပ်နှံနိုင်ပါတယ်။
“ ကျေးဇူးပြု၍ စပေါ်ငွေပြန်လည်ရရှိနိုင်ခွင့်ရှိ/မရှိ သေချာစွာသိရှိနိုင်ရန် ငှားရမ်းခြင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သေချာစွာဖတ်ရှူပါ။၏
– စက်ကို ၇ရက်အတွင်းပြန်လည်အပ်နှံပါက စပေါ်ငွေ ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
– စာချုပ်သက်တမ်းပြီးဆုံးချိန်တွင်စက် ကိုပြန်လည်အပ်နှံပါက စပေါ်ငွေပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။စပေါ်ငွေကို ပြန်လည်ရရှိရန် အတွက် ရက် ၃၀ အစီအစဉ် တစ်ခုကို လစဉ် ဝယ်ယူရန် လိုအပ်ပါသည်။
– ၇ရက်ကျော်လွန်၍ သို့မဟုတ် စာချုပ်သက်တမ်းမပြည့်မီ ပြန်လည်အပ်နှံပါက ပြင်ဆင်မွမ်းမံစရိတ် (router အတွက် ၁၀၀၀၀ ကျပ်၊ mifi အတွက် ၅၀၀၀ ကျပ်) ပေးသွင်းရပါမည်။
မှတ်ချက်။ စက်ပြန်လည်အပ်နှံရာတွင် မူလဘူးခွံနှင့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုပ ငှားရမ်းစဉ်အခြေအနေအတိုင်းပြန်လည်အပ်နှံရမည်။ ဥပမာ – အားသွင်းကြိုး၊ စက်၊ ဆင်း(မ်)ကဒ် သို့မဟုတ်က စပေါ်ငွေပြန်မရနိုင်ပါ။
– unlimited30 အစီအစဉ်ကို စာချုပ်သက်တမ်း ကာလအတွင်း လစဉ်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် စက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ “
“ router နှင့် mifi စက်များကို စပေါ်ငွေပေးသွင်းပြီး ငှားရမ်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုရုံဖြင့် အလွယ်တကူငှားရမ်းနိုင်ပါပြီ။ router ငှားရမ်းစာချုပ်မှာ ၁၂ လဖြစ်ပြီး mifi အတွက် ငှားရမ်းစာချုပ်မှာ ၆လဖြစ်သည်။
စက်ငှားရမ်းခြင်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ananda.com.mm/shop/devices တွင်ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။”
ငှားရမ်းကာလအတွင်း စက်ချို့ယွင်းမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ငှားရမ်းကာလအတွင်း စက်ချို့ယွင်းမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက သင့်စက်ကို နီးစပ်ရာ ananda experience ဆိုင်တွင် လာရောက်ပြသ၍ အကူအညီရယူနိုင်ပါတယ်။
စာချုပ်သက်တမ်းမပြည့်မီ စက်ပြန်လည်အပ်နှံပါက ပြင်ဆင်မွမ်းမံစရိတ် (router အတွက် ၁၀၀၀၀ ကျပ်၊ mifi အတွက် ၅၀၀၀ ကျပ်) ပေးသွင်းရပါမယ်။
ရက် ၃၀ အစီအစဉ်ကို လစဉ် ဝယ်ယူခြင်းမရှိပါက စပေါ်ငွေကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါသလား။
စပေါ်ငွေကို ပြန်လည်ရရှိရန် အတွက် ရက် ၃၀ အစီအစဉ် တစ်ခုကို လစဉ် ဝယ်ယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဝယ်ယူခြင်းမရှိပါက စပေါ်ငွေကို ဆုံးရှုံးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
မျှတစွာသုံးစွဲမှု မူဝါဒ Fair Usage Policy ဆိုတာဘာလဲ။
အနန္တသည် သုံးစွဲသူများ အင်တာနက် သုံးစွဲမှု အတွေ့အကြုံ ကောင်းများကို သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့်ရရှိနိုင်စေရန် အစဉ်အမြဲ ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အင်တာနက်ကွန်ယက်အတွင်း ရရှိနိုင်သော bandwidth တွင် သုံးစွဲသူများအားလုံးအဆင်ပြေစေရန် သုံးစွဲသူအားလုံး တူညီသော အတွေ့အကြုံကောင်း များရရှိပေးအပ်နိုင်စေရန် ကိုလည်းအလေးထားဆောင်ရွက်နေပါသည်။
သို့သော် အချို့သော သုံးစွဲသူများမှာ ပုံမှန်သုံးစွဲသော အတိုင်းအတာ ပမာဏထက်ကျော်လွန်သုံးစွဲမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက အခြား ပုံမှန်သုံးစွဲသူများအတွက် တူညီသော သုံးစွဲမှု အခွင့်အလမ်းအတွေ့ကြုံကောင်းများ ရရှိနိုင်မှုကို ထိခိုက်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သုံးစွဲသူများကြား သာတူညီမျှသော သုံးစွဲမှု အခွင့်အရေး
အတွေ့အကြုံကောင်းများ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် သုံးစွဲသူအားလုံးလိုက်နာရန်လိုအပ်သော မျှတစွာသုံးစွဲမှု မူဝါဒကို ချမှတ်ထားပါသည်။
မနက် ၈ နာရီမှ ည ၁၂ နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ရုံးချုပ်တည်နေရာ – အမှတ် (၅၂၀ အေ၊ ၁+၃ ဘီ)၊ မြေညီထပ်နဲ့ တတိယထပ်၊ Excel Home Mart ရွှေဂုံတိုင်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ (Excel Shopping Mall အနီး)
Copyright © 2019 All rights reserved by ananda